Xaalad kacsan oo ka taagan Xarardheere & burcad badeed isku qabsaday lacag madax furasho. – Radio Daljir
Xarardhere, Jan 19 ? Xaalada dagaal oo aad u xooggan ayaa saaka laga dareemayaa degmada Xarardheer ee gobolka Mudug kadib markii kooxo burcad-badeed Soomaali ahi isku ?maadhaafeen qaybsiga lacag madax furasho ah oo laga qaatay markab nooca saliidda qaada oo ka diiwaan gashanaa wadanka gariigga.
Kooxahaan burcad-badeeedda ah ayaa ku heshiin waayey habka loo qaybsanayo lacag madax furasho ah oo caddadkeedu dhan yahay illaa 7 milyan oo dollar, taasi oo ah lacagii ugu badnayn ee ay abid madax fursho u qaataan kooxaha burcad-badeeddu, tan iyo muddadii ay ku hawllanaayeen qawlaysiga sharci darrada ah ee xagga badda.
Dagaal dhaxmaray burcad-badeedda isku khilaafsan qaybsiga lacagta, ayaa la tilmaamayaa in ay ku dhinteen 4 ka mid ah burcad-badeedda inkastoo ay jiraan warar kuwaasi ka madax-bannaan oo tilmaamaya dadka dhintay in ay ku jiraan dad shacab ah oo ku suganaa goobta burcaddu ay ku dagaallameen.
Inta la ogyahay illaa 6 kale ayaa la sheegayaa dagaalkaasi in ay ku dhaawacmeen, waxaana haatan degmada Xarardheere ka socda abaabulka iyo hub uruursi burcad-badeed inkastoo uu taana barbar socda dadaallo ay wadaan odayaasha deegaanka Xarardheere, kuwaasi ku guda jira sidii ay xiisadda u damin lahaayeen.
Markabka muran iyo is-maandhaafku ka dhashay lacagtii madax furashada ahayd ee laga qaatay ayaa lagu magacaabaa Maran Centaurust, wuxuuna siday saliid gaaraysa illaa labo milyan oo fuusto, kaasi oo xilligii la qabtay ku gooshayey oo uu ka babanayey calanka wadanka Giriiggu.
Marabka Maran Centaurust, waxaa saaran 28 shaqaale ah oo u kala dhashay wadamo dhawr ah, kuwaasi oo dhammaantood la tilmaamay xilligii la siidaayey in ay bad-qabeen.
Ma cadda sida ay ku danbayn doonta xaaladda degmada Xarardheere ee gobolka Mudug oo ay isku haystaan burcad-badeed qaadatay lacagtii ugu badnayd ee ay waligood madax furasha u helaan.